Waqtiga uu furmayo Shirka Beesha Mudullood oo lagu dhawaaqay - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Waqtiga uu furmayo Shirka Beesha Mudullood oo lagu dhawaaqay
August 1, 2020 at 13:04 Waqtiga uu furmayo Shirka Beesha Mudullood oo lagu dhawaaqay2020-08-01T13:04:08+02:00 WARARKA SOOMAALIYA
Shirweynaha Beesha Mudullood ayaa waxaa la filayaa inuu si rasmi ah uga furmo Magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka Soomaaliya gaar ahaan Mowlaca Khaliif Cabduqaadir Macalin Nuur.
Shirka Beesha Mudullood ayaa waxaa uu furmi doonaa Maalinta Isniinta ee soo socota, isla markaana waxaa kasoo qeyb gelin doona in ka badan 1000 qof oo lagu Casuumay, sida xubo ka tirsan Beesha ay u sheegeen Wariye Aweys Geedi.
Inta uu socdo Shirka ayaa waxaa looga hadli doonaa Aayaha Beesha Mudullood, qorshayaasha kala duwan ee Beesha hiigsaneyso iyo Arrimo kale oo xasaasi ah, waxaana Shirka Khudbado ka jeedin doonta Mas’uuliyiinta kala duwan eek a qeyb galeysa.
Dadka lagu casuumay ayaa waxaa kamid ah Madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya ee kala ah Cali Mahadi, Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud, sidoo kalena ay kasoo qeyb geli doonaan dhammaan Mas’uuliyiinta kala duwan ee dowladda ee Mudullood, siyaasiyiin, Culimo, Odayaal dhaqmeed iyo dadweyne badan oo ka tirsan Beesha Mudullood.
Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf Madaale iyo xubno kale ayaa wada diyaar garoow ballaaran oo ku aadan sidii uu qabsoomi lahaa Shirka Beesha oo la wada sugayo, isla markaana beshii hore la filayay inuu dhaco, hayeeshee uu baaqday.
Sidoo kale waxaa xal-buuxa laga gaaray Khilaaf horaantii Bishii lasoo dhaafay ee Luuliyo ka dhashay qabsoomida shirkaas, sida uu sheegay Sheekh Cali Wajiis, waxaana haatan arrintaas laga gaaray xal buuxa, iyadoona dadaadka ugu badan ay bixiyeen Mas’uuliyiin iyo xubno kale uu kamid yahay Boqor Cabdullaahi Geedi Shadoor.
Ergada lagu Casuumay Shirka ayaa waxaa ka dhalatay dood xoogan, waxaana siyaasiyiin uu kamid yahay Madaxweynihii hore ee dalka Cali Mahdi, Senatar Muuse Suudi iyo Boqor Cabdullaahi Geedi ay dalbadeen in Shirka la baajiyo ilaa iyo inta laga saxayo Tirada Ergada ee lagu Casuumay Shirkaas.
Shirkaan u furmaya Beesha Mudullood ayaa waxaa uu kusoo aadayaa, iyadoo dhawaan Xildhibaanada Golaha Shacabka ay kalsoonidii kala noqdeen Ra’iisul Wasaarihii dalka Xasan Cali Kheyre iyo Xukuumaddiisa, isla markaana dalka uu jiro xaalad siyaasadeed.
« Guardiola oo doonaya inuu la soo wareego mid ka mid ah ciyaartooyda waa weyn ee kooxda Barcelona
Cuba and Kenya Discuss Efforts to Free Kidnapped Cuban Doctors »